Amakhosi kunye noongameli baseItali: Ukususela ngo-1861 ukuya ku-2014
Emva kwephulo lokuthabatha eliqeshwe ixesha elide, elibandakanya amashumi eminyaka kunye neengqungquthela zeengxabano, ubukumkani baseItaly bhengezwa ngoMatshi 17, 1861 yipalamente esekelwe eTurin. Ubu bukumkani baseNtaliyane abatsha bahlala iminyaka engaphantsi kwemashumi anesithoba, baphonswa ngumbononongo ngo-1946 xa iqela elincinci livota ukudala iPhabliki. Ubukumkani babonakaliswe kakubi ngobudlelwane babo nama-fascists kaMosolini , kunye nokungaphumeleli kwiMfazwe Yehlabathi 2. Akunokuba utshintsho lwamacala lungathintela utshintsho kwi-republic.
Imihla enikeziweyo yimizuzu yolawulo olukhankanywe ngalo. Iziganeko ezibalulekileyo kwimbali ye-Itali.
1861 - 1878 uKumkani uVictor Emmanuel
U-Victor Emmanuel II wePiedmont wayephambili ekusebenzeni xa imfazwe phakathi kweFransi neAustria yavula umnyango wokudibanisa isiTaliyane, kwaye ngenxa yabantu abaninzi, kubandakanywa nabalandeli abafana noGaribaldi, waba nguKumkani wokuqala wase-Italy. UVictor wandisa le mpu melelo, ekugqibeleni wenza iRoma ibe yinkunzi yombuso omtsha.
1878 - 1900 uKumkani uMberto I
Ukubusa kuka-Umberto I kwaqala ngendoda eyayibonakalisa ukupholisa emfazweni kwaye yanikezela ngokuqhubekayo kunye nendlalifa. Kodwa u-Umberto wadibanisa iItali kwiJamani kunye ne-Austria kunye ne-Austria kwi- Triple Alliance (nangona beza kuqala ukuphuma kwiMfazwe Yehlabathi enye ), babejongene nokungaphumeleli kwandiso lwekoloni, kwaye baqubuzela ekubandezelweni, umthetho wokulwa kunye nokubulawa kwakhe.
1900 - 1946 uKumkani uVictor Emmanuel III
I-Italy ayizange ihambe kakuhle kwiMfazwe Yehlabathi Yodwa, inquma ukujoyina ukufuna umhlaba ongezelelweyo kunye nokungaphumeleli ukuya e-Austria. Kodwa ke isinqumo sikaVictor Emmanuel III sokunikela ingcinezelo kwaye kubuze umholi we-fascist uMsolini ukuba enze urhulumente owaqala ukutshabalalisa ubukumkani. Xa umkhosi weMfazwe Yehlabathi 2 wabuya uEmanuel wababamba u-Mussolini, kwaye isizwe sajoyina amahlakani, kodwa u-King akazange akwazi ukubalekela ihlazo kwaye wayenqabile ngo-1946.
Ngowe-1946 uKumkani uMberto II (Regent ukususela ngo-1944)
U-Umberto II wathatha isikhundla sikayise ngo-1946, kodwa i-Italia yabekwa umboniso kwinyanga efanayo ukugqiba isigqibo saloo rhu lumente wabo, kwaye abantu abayizigidi ezilishumi elinambini bavotela i-republic; izigidi ezilishumi zivotelwe itrone, kodwa kwakungekho ngokwaneleyo.
Ngo-1946 ukuya ku-1948 u-Enrico da Nicola (iNtloko kaRhulumente kaRhulumente)
Ngomvo odlulileyo ukudala i-republic, kwindibano ephakamileyo yaba yinto yokwenza umgaqo-siseko kwaye unqume ngesimo sikaRhulumente. U-Enrico da Nicola wayeyinhloko yombuso wesikhashana, avotelwe ngobuninzi kwaye waphinde wakhethwa emva kokuba esula phantsi ngenxa yokugula; IRiphabhuliki entsha yaseNtaliyane yaqala ngoJanuwari 1, 1948.
Ngo-1948 - 1955 uMongameli Luigi Einaudi
Ngaphambi kokuba umsebenzi wakhe njengoLimigi Einaudi uyingcali yezoqoqosho kunye nezemfundo, kwaye emva kweMfazwe Yehlabathi yesiBili wayeyinduna yokuqala yeBhanki iItaly, umfundisi kunye nomongameli wokuqala weRiphabhlikhi yaseNtaliyane.
1955 - 1962 uMongameli Giovanni Gronchi
Emva kweMfazwe Yehlabathi enye i-Giovanni Gronchi omncinci inceda ukuseka i-Popular Party e-Itali, iqela lamaKatolika elijolise kwipolitiki. Wayethatha umhlala-phantsi ebomini babantu xa uMosolini wagxininisa iqela phantsi, kodwa wabuyela kwezopolitiko kwinkululeko emva kweMfazwe Yehlabathi 2, ekugqibeleni waba ngumongameli wesibini. Wenqaba ukuba ngumfanekiso, ebonisa ukugxeka 'ukuphazamisa'.
Ngo-1962 - 1964, uMongameli uActon Segni
U-Antonio Segni wayeyilungu lePartial Popular ngaphambi kwexesha le-fascist, waza wabuyela kwezopolitiko ngo-1943 kunye nokuwa kwekarhulumente ka-Mussolini. Ngokukhawuleza ilungu eliphambili likarhulumente emva kokulwa, kwaye iziqinisekiso zakhe kwezolimo zaholela ekuhlaziyweni kwegrama. Ngomnyaka we-1962 wanyulwa nguMongameli, waba nguNdunankulu ngokuphindwe kabini, kodwa washiya umhlala-phantsi ngo-1964 kwizizathu zempilo.
1964 - 1971 uMongameli Giuseppe Saragat
Ulutsha lukaGiuseppe Saragat lwaluquka ukusebenzela iqela lezenhlalakahle, ukuthunjwa e-Italy ngama-fascists, nokubuyela kwindawo ethile kwimfazwe apho wayephantse ebulawa amaNazi. Kwimicimbi yezopolitiko yase-Italiyali emva kokulwa kwe-Italy uGiuseppe Saragat ekhankasele ukudibanisa imanyano yabasebenzi bezentlalo kunye noomakhomanisi, kwaye wayebandakanyeka egameni lakhe utshintsho kwi-Italian Social Democratic Party, kungekho nto enxulumene namaSoviet axhaswe ngamaKomanisi. Wayengurhulumente, umphathiswa wezemicimbi yangaphandle, kunye nombane wamandla enyukliya. Waphumelela njengomongameli ngo-1964, waza wanyula ngo-1971.
1971 - 1978 uMongameli Giovanni Leone
Ilungu le-Christian Democratic Party, ixesha likaGiovanni Leone njengomongameli liye lahlaziywa kakhulu. Wayekhonza kurhulumente rhoqo ngaphambi kokuba abe ngumbongameli, kodwa wayemele alwe nemibango yangaphakathi (kubandakanywa nokubulala umntu owayesakuba yinkulumbuso) kwaye, nangona wayebhekwa njenginyanisekileyo, kwafuneka ashiye phantsi ngo-1978 ngenxa yecala lokukhwabanisa. Enyanisweni, abamangalelwa bakhe kamva bafanele bavume ukuba bephosakele.
Ngo-1978 - 1985 uMongameli uSandro Pertini
Ulutsha lukaSandro Pertini lwaluquka umsebenzi wezentlalo zaseNtaliyane, ukuvalelwa ngurhulumente we-fascist, ukuboshwa yi-SS, isigwebo sokufa size sibaleke. Wayengumalungu weklasi yezopolitiko emva kwemfazwe, kwaye emva kokubulala kunye neengcwangu zango-1978, kwaye emva kwexesha elide lempikiswano, wakhethwa ukuba abe ngumengameli wokulungiswa kwesizwe. Wavimba izindonga zongameli waza wenza umsebenzi wokubuyisela umyalelo.
1985 - 1992 uMongameli Francesco Cossiga
Ukubulawa kukaNdunankulu u-Aldo Moro ukhulula kuloluhlu, kwaye njengoNgqongqoshe wezoPhathiswa uFrancesco Cossiga ukuphathwa kwesi siganeko wagwetywa ngokufa kwaye kwafuneka ashiye phantsi. Nangona kunjalo, ngo-1985 waba nguMongameli ... kwaze kwaba ngo-1992, xa efuneka ukuba ashiye phantsi, ngeli xesha ngokubhekiselele kuhlazo olubandakanya i- NATO kunye nabadlali be-guerrilla abachasayo.
Ngo-1992 - 1999 uMongameli Oscar Luigi Scalfaro
Ixesha elide lama-Democrat lamaKristu kunye nelungu labameli baseTaliyane, uLuigi Scalfaro waba ngumongameli njengomnye ukhetho lokunyaniseka ngo-1992, emva kweeveki ezininzi zokuxoxisana. Nangona kunjalo, ii-Christian Democrats ezizimeleyo zazingakhange ziphumelele kumongameli wakhe.
Ngo-1999 - 2006 uMongameli uCarlo Azeglio Ciampi
Ngaphambi kokuba abe ngumbongameli, imvelaphi kaCarlo Azeglio Ciampi yayimali, nangona wayeyi-classicist eyunivesiti; waba ngumongameli ngo-1999 emva kokuvota kokuqala (i-rarity). Wayedumekile, kodwa nangona isicelo sokwenza njalo waxhomekeka ekumeni okwesibini.
2006 - Giorgio Napolitano
Ilungu elitshintshileyo leqela lamaKomanisi, uGiorgio Napolitano ukhethwa njengoMongameli wase-Italy ngo-2006, apho afuneka ajongane noorhulumente waseBerlusconi aze anqobe uchungechunge lwezoqoqosho kunye nezopolitiko. Wenza njalo, waza wema kwekota lesibini njengomongameli ngo-2013 ukuze aqinisekise uluntu.
UGilles de Rais 1404 - 1440
Iziganeko ezinkulu kwiMbali yamandulo
Iifoto zeGenghis Khan
I-Tipu Sultan, i-Tiger ye-Mysore
Biography kaGrigory Rasputin
Yayiyintoni Ingqungquthela Yabanesine eChina?
I-Wind Wind Big
5 Izindlela ezilula zokuphucula isifundo esibuhlungu
Imigaqo yeHockey kwi-Glance
Ukushisa Imali - Kemistri Ukubonisa
Imizekelo yeentando zeLullabies
Yintoni eyahlukileyo phakathi kweFiddle kunye neVolin?
UkuThuthuka kweBridge Bridge
Kutheni ungafanele uthabathe amanqaku kwi Laptop yakho
Inkcazo kunye neMibono yoBhala beSayensi
IziPhuculo zokuSebenza: Ukongeza iiKomas, iiColons, i-Semicolons, kunye neDashes
Ziziphi iintlobo ezahlukeneyo zokukhupha isisu?
Yintoni eyahlukileyo phakathi kokuchaneka nokuchaneka?
Iingxenye zePaddleboard Standup (SUP)
Imbali ye-Sweater Christmas Sweater
Ngokuphathelele "Ababoleki" nguMary Norton
IYunivesithi yaseMinnesota GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Indlela Yokufumana I-Sound Cleared Out of Guitar yakho
Indlela yokucoca okanye ukuhlambulula indawo engcwele
I-Biography yeGymnast uNadia Comaneci